Bruno Fernandes oo rikoor waali ah ka sameeyay Manchester United… isagoo dhaafay Paul Scholes – Gool FM
Dajiye February 19, 2021
(Manchester) 19 Feb 2021. Kooxaha Manchester United iyo Real Sociedad ayeey xalay ciyaar xiiso badan ku dhex martay magaalada Turin, taasoo ka tirsaneyd kulamada wareega 32-da ee tartanka UEFA Europa League.
Manchester United ayaa guul muhiim ah ka soo heshay kooxda Real Sociedad oo ay ku wada ciyaareen garoonka Juventus ee Allianz Stadium, xilli uu xilli Bruno Fernandes uu labo jeer gaaray shabaqa, kulankii lugta hore wareega 32-da ee tartanka UEFA Europa League, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-4.
Xiddiga khadka dhexe kooxda Red Devils ee Bruno Fernandes, ayaa xalay dhigay rikoor kaddib markii 2 gool muhiim ah uu ka dhaliyay goolhaayaha kooxda Real Sociedad ee Álex Remiro.
Xiddiga reer Portugal ayaa dhaafay rikoorka halyeeyga kooxda Manchester United, ee Paul Scholes, kaasoo ahaa ciyaaryahankii ugu dambeeyay ee khadka dhexe kaga ciyaara United ee dhaliya 20 gool hal xilli ciyaareed.
Labadii gool uu ka dhaliyay Bruno Fernandes kooxda Real Sociedad ayaa ka dhigtay inuu jabiyo rikoorka Paul Scholes, wuxuuna ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan dhaliyay 21 gool, isagoo ka sara maray rikoorkii uu halyeeyga reer England sameeyay xilli ciyaareedkii 2002/03.
Bruno Fernandes ayaa laga yaabaa inuu noqdo gooldhaliyhii ugu sareeyay Man United ee dhaliya in ka badan 30 gool hal xilli ciyaareed, waana rikoor aan la gaarin tan iyo Robin van Persie ee xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay ee xilligii Sir Alex Ferguson.
Mason Greenwood oo shaaca ka qaaday xiddiga uu kaga daydo kubadda cagta